ကမ္ဘာကြီး | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ကမ္ဘာကြီး
သင့်ရဲ့ Next ကိုအားလပ်ရက်တွင်အဆိုပါ Gusto သည် Go
သငျသညျတူညီသော '' ol ထက်ပိုမိုထိုက်ပါနဲ့, သင်၏နောက်အားလပ်ရက်များအတွက်တူညီ '' ol, သင်တန်းသင်ပြု! တစ်ခုခုသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်သလား.
ဖလော, အီတလီ ‘ Of David and Such
A guide to the resorts towns of the Costa del Sol, as you drive to Malaga from Gibraltar, စပိန်.
Top Ten Travel Destinations – အပိုင်းငါ
ယခု, An Easier Way To Visit China
China's popularity asavacation destination is booming. Not only is Chinaanew World Trade Organization member and host to the 2008 နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်, the country is also projected to soon be the number-one travel destination, according to the World Tourism Organization.
Valentia, dating back to 137 B.C., is what we now know as Valencia, စပိန်. If there was any confusion as to where Valencia is or what it is known for, the city's renovation with breathtaking architecture turned into museums, aquariums and Imax cinemas plus the hosting of the world famous America's Cup 2007 has definitely put it on the map. Valencia has gone through all kinds of cultures, taking advantage of each one's contributions, from the Romans through the Arabs, the Cath...
ဗန်ကူးဗား – ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးစီးတီး?
ဗန်ကူးဗား၏လှပသောမြို့ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ၏အနောက်တောင်ပိုင်းထောင့်တွင်တည်ရှိသည်, ကနေဒါ; ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်. ယင်းကမ်းခြေ Range တောင်တန်းအားဖြင့်သတိမမူသုံးယောက်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာရေအားဖြင့်ဝိုင်းရံခံရ, မြို့သူမြို့သားအမှန်တကယ်ပျောက်သင့်ရဲ့အသက်ရှုကြာတဲ့ရှုခင်းရှိပါတယ်. သာ. ကွီးမွတျဗန်ကူးဗားဒေသဆိုင်ရာခရိုင် (GVRD) သဲသောင်ပြင်ကနေအရာအားလုံးရှိပါတယ်, တောင်များနှင့် 192 တစ်နာမည်ကျော်မြို့လယ်ဧရိယာမှလှပသောဥယျာဉ်များ, အလွစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး. ကြောင့်အဲဒါကို LOCATION ရဲ့ ...
The best things in nature are those that were preserved since God created Earth. တန်ဇန်းနီးယား, being one of the places, which for many years have been attempting to preserve its natural beauty, asserts the wonders that may seem to have come directly from the Creator's hands. Its beauty is unrivalled, its resources vast. Tanzania is simplyaplace of great marvel. Its wildlife sanctuaries are fresh and unspoilt. Wildlife roam in its area as it was intended after the creation. T...
မင်္ဂလာပါသြစတြီးယားကနေ: Arrival And First Impressions (ငါ)
Many of you will know that I am originally from Austria, but that I have been living in Toronto for more than 20 အနှစ်. I left Austria early on, by myself, at the young age of 20 and foundapermanent home in Canada's largest, most multicultural city. I always realized that I originally came fromabeautiful country, but somehow the big wide world was calling me and settling in Canada's most cosmopolitan urban centre has beenagreat decision. In the early years I used to ...
တစ်ဦးအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးအဖြစ် Torrevieja ကောက်ဖို့ဥာဏ်ကောင်းသောသူမည်သူမဆိုတစ်ဦးကြီးမြတ်အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံရှိသည်မယ်. စပိန်အတွက်ကော့စ Blanca ပေါ်မှာဤချစ်စရာကောင်းတဲ့အပန်းဖြေစခန်းဧရိယာကိုအလွယ်တကူ Alicante လေဆိပ်ကနေဝင်ရောက်နေသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စိုးရိမ်အခမဲ့ထုတ်စတင်သည်. အကယ်., ကျွန်တော်တို့အများစုနဲ့တူ, စွန့်ပစ်ရန်လည်းအဖိုးတန်အားလပ်ရက်သင်တွေ့, သငျသညျ Torrevieja အတွက်လုပ်ဖို့အမှုအရာအများကြီးကိုရှာဖွေရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်. ပူနွေးသောနေသာကမ်းခြေပေါ်မှာမုသား, အနည်းငယ်ကစား (ဒါမှမဟုတ်တွေအများကြီး) ဂေါက်သီး, ရှုခင်းများကိုလည်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့သွားသည်, အချို့သောရေ spor ကြိုးစားကြ ...
နယူးယောက်မြို့ပညာရေးဆိုင်ရာ Entertainment ကလမ်းညွှန်
ကျနော်တို့သင်ယူမှုများအတွက်အသက်ကြီးလွန်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြနဲ့ကျွန်တော်သိပ်ပျော်စရာရှိသည်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်. သငျသညျငယျရှယျရှိမရှိ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူငယ်များ, သို့မဟုတ်နှလုံးမှာရိုးရိုးငယ်ရွယ်များမှာ, နယူးယောက်မြို့ကိုသင်ပညာပေးနည်းလမ်းများ entertaining အများကြီးရှိပါတယ်.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, အကြား 20 နှင့် 50 percent of international travelers--an estimated 10 million Americans--develop travelers' diarrhea (TD).
Benelux is an economic union of three neighbouring monarchies - ဘယ်လ်ဂျီယမ်, the Netherlands, and Luxembourg. Despite long-standing ties, each country's capital exudes its own unique charms.
Foracountry that encompasses an area of over 10.5 million square miles, it is no coincidence most people know very little about Russia, aside, ဒါပေါ့, from textbook blurbs of Tsarist rule, Mongolian raids, bloody revolutions and snowy, desolate Steppes. The mere expanse of the Russian border makes the countryamore versatile destination than any other place in the world. Visit the arctic zone and navigate through sub-tropical regions without ever leaving the country!
ဧည့်သည်ဟူစတန်ဖို့လမ်းညွှန်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ယူအက်​​စ်အေ
ပါရာဂွေး , known for its mix of history and folklore has several large, top ranked hotels to stay in. Paraguay is located in Central South America, withapopulation of five million people. The popular language is Spanish, but Guarani is widely spoken too. Whether you are visiting forashort time, or an extended period, there areahost of choices to stay. The sub-tropic climate of South America makes visiting anytime possible andapleasure. There are hotels in Paraguay ...
သင်ကြား 10 အဘယ်သူမျှမကအခြားခရီးသွားက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်သင်ပြောပြလိမ့်မည်ဟု Dublin အိုင်ယာလန်နှင့် ပတ်သက်. အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ. ဒပ်ဘလင်ပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာနှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများအထင်ကြီး, ဂုန်နီ၏နေအိမ်!
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မိသားစု Adventures ကိုများအတွက် New Orleans သွားရောက်ကြည့်ရှု
သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှား-ရှာဖွေနေသူများအပြည့်အဝတစ်မိသားစုရှိမရှိ, သမိုင်းရိုက်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်အနုပညာချစ်သူများ, New Orleans လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်.
Being excellent navegators and havingadeep desire to expland its territories, The Azores Islands were founded by the Portuguese in 1317. This isaclump of nine islands in the rough Atlantic Ocean about 1,400 kilometers west of Lisbon, ပေါ်တူဂီ. Asacurious traveller, I always make itahabit of finding out howacity, town or in this case an island got its name. The name Azores comes from the name ofabird similar toagoshawk which is what the first settlers thought the...
ဂရိနိုင်ငံ ‘ History andaModern Touch
Many consider Greece the cradle of modern civilization. The historical sites in the country are impressive. ဆဲ, Greece also has modern touches making itagood travel destination.
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ‘ the ideal holiday destination for the whole family!
သငျသညျလာနှစ်ပေါင်းမှတ်မိဖို့သေချာညနေခင်းစွန့်စားမှုနှင့်အတူဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားသို့မဟုတ် Universal Studios က၌သင်တို့၏တစ်နေ့တာရဲ့အလွန်မိပြီအရှိန်အဟုန်ကနေချိုးယူပါ. Orlando တွင်ကမ္ဘာ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ထူးခြားသောညစာစားပွဲရုံအချို့ကမ်းလှမ်း. ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမသင်၏နောက် Orlando တွင်အားလပ်ရက်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ညဥ့်ဘွတ်ကင်.
သငျသညျဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားမှခရီးစဉ်ယူနှစ်ပေါင်းစီစဉ်ပြီ. သင့်ရဲ့ကလေးတွေသူတို့နေဆဲဒစ္စသောမှော်ယုံကြည်ရှိရာအထူးအသက်အရွယ်မှာယခုဖြစ်ကြ၏. သင်ငွေသားတက်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ. ထိုအခါသင်သည်ဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားမှချွတ်ဦးတည်ခြင်းနှင့်သင့် hard ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံအများကြီးဖြုန်းမတိုင်မီအနည်းငယ်လှည့်ကွက်သင်ယူဖို့လိုအပ်. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုပန်းခြံလက်မှတ်တွေရှာနေရှေ့တော်၌ထိုအကြောင်းနားလည်တဲ့ဒစ္စနေးအပန်းဖြေများအတွက်ပထမဦးဆုံးအလှည့်ကွက်သုံးပတ်က e-ပင်လယ်အော်အပေါ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်. Nev ...
The word Texas derives fromaword in the Caddoan language of the Hasinai, which means "သူငယ်ချင်းများ" or 'Allies'. It is also known as the Lone Star because of the state flag's design:abroad vertical blue stripe at left, centered byasingle white star, with horizontal bars of white and red on the right. Red means courage, White means liberty and Blue stands for loyalty. Texas is internationally known for its energy and aeronautics industries, and for the ship channel at the Port of Houston'the largest in the U.S. in international commerce and the sixth-largest port in the world. landmarks make Texas special state that is famous for its variety of activities that you can do to enjoy your visit and spend very interesting time.
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခရီးစဉ်ယူပြီးနှစ်ခုမြို့ကြီးများအကြားတိုတောင်းလွန်းပျံသန်းထက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့, အနည်းငယ် Pre-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူ, သငျသညျတတ်နိုင်သမျှရှည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အဖြစ်သာယာသောစေနိုင်သည်.
ထိုအခြား Orlando တွင်မှာတစ်ဦးက peek
Learning Spanish Part Twenty-four: The Acquisition-learning Hypothesis
ကုထုံးလင်းရဲ့စီးပွားရေးကို Traveller နှိပ်
1 / 351234567...2030...နောက်တစ်ခု"နောက်ဆုံး»